ဝါလား၊ အရည်အချင်းလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ါလား၊ အရည်အချင်းလား
Posted by ashinindaka on Dec 31, 2010 in News |7comments
ရှည်ရည်ဝေးဝေးသိချင်ရင်တော့ ငါတို့ဆရာ ဂေါတမရှိတယ်။
Happy New year to ALL! May all be happy, healthy, wealthy in this New Year 2011!
thank you so much venerable for your wishes
အခုတော့ မသူတော် တရားက လွှမ်းနေသလိုပဲ ဘုရာ့
တတိယသံဃာယနာတင်ပွဲအထိ ရှင်းပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီပွဲတွေကို ရှေ့ပိုင်းသာသနာ နှစ်၃၀၀အတွင်းလောက်မှာ လုပ်ခဲ့ကြပြီး အိန္ဒိယနဲ့သီဟိုကျွန်းမှာ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ စတုတ္တအကြိမ်နဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်တွေကြတော့ တပည့်တော်ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရ နိုင်ငံရေးပါသည် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒပါသည် ထင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းအကြိမ်တွေကလည်း မြန်မာပြည်မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တတိယအကြိမ်နဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်များအကြားမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ကျော် ကွာနေပါသည်။ တခါ မဟာစည်ဆရာတော်နှင့်နတ်သားတပါး ဆွေးနွေးခန်းအသံဖိုင်ထဲတွင် ထိုနတ်သားက (ယာမာနတ်ပြည်မှလို့ထင်ပါသည်) အဲဒီအချိန်က မကြာခင်ကျင်းပတော့မဲ့ ငါးကြိမ်မြောက် သံဃာယနာတင်ပွဲကို မသိကြောင်း မှတ်သားဖူးပါသည်။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တုန်းက ပွဲကိုလည်းမသိလို့ပြောသည်ထင်ပါသည်။ တကယ်နတ်ရှိခြင်း မရှိခြင်းထက် ထိုနတ်သားက မသိခြင်းကို ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ဘုရား၏ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကို သိလိုပါသည်ဘုရား။
စတုတ္ထသံဂါယနာကို သီဟိုဠ်မှာ လုပ်တာပါ။ ဆက်ရေးနေပါတယ်။ မဟာစည်နဲ့ နတ်သားစကားပြောခန်းကိုတော့ (ကိုယ့်အယူအဆပြောရရင် မှန်သော်ရှိ၊ မမှန်သော်ရှိ) လံကြုပ် လို ယူဆပါတယ်။
ကျေးဇူးကြီးလှပါပေတယ်အရှင်ဘုရား….တပည့်တော်တို့ရဲ့ အတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမူကံကြောင့် ယခုဘ၀မှာ အလွန်ရခဲလှပါသော လူ့ဘ၀ကိုရရှိပြီး တန်ဖိုးရှိလှသော ဗုဒ္ဒ၏အဆုံးအမ တွေကိုနာကြားခွန့် ရရှိခြင်းမှာ အမှော်အမြင်ကြီးလှသော သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ အနိူင်းမဲ့လှသော ကျေးဇူးတော်ပါအရှင်ဘုရား….